Mihamafy ny fanelezana vaovao diso amin’ny fahatongavan’ireo mpitsoa-ponenana Afghàna any Makedonia Avaratra · Global Voices teny Malagasy
Mihamafy ny fanelezana vaovao diso amin'ny fahatongavan'ireo mpitsoa-ponenana Afghàna any Makedonia Avaratra
Araraotina ireo Mpitsoa-ponenana anaovana propagandy politika
Voadika ny 03 Oktobra 2021 5:24 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Português, English, Español, Français, Ελληνικά, English
Mpitsoa-ponenana avy any Afghanistan tonga tao amin'ny Seranam-piaramanidina Iraisampirenena Skopje ny alin'ny 30 Aogositra 2021. Sary avy amin'ny Meta.mk, nahazoana alàlana.
Mifototra amin'ny fitateram-baovao voalohany nataon'ny Meta.mk ity tantara ity. Navoaka eto indray ny endrika nasiam-panovana noho ny fifanarahana fizarana votoaty eo amin'ny Global Voices sy ny Metamorphosis Foundation.
Tonga tao amin'ny seranam-piaramanidina Iraisampirenena Skopje tamin'ny alin'ny 30 aogositra ny vondrona voalohany ahitana olom-pirenena Afgàna miisa 149, tonga avy any Tbilisi, Georgia. Vantany vao tafidina ny fiaramanidin'izy ireo, dia nitondra vehivavy bevohoka iray sy ny vadiny ary ny zanany tany amin'ny Toeram-pitsaboana misahana ny vehivavy sy ny fananahana tao Skopje ireo fiara mpamonjy voina, ary olona iray hafa torana kosa no nentina tany amin'ny hopitaly.
Noraisin'ny governemantan'ny Repoblikan'i Makedonia Avaratra sy ny firaisamonim-pirenena eo an-toerana ireo anatin'ny firaisankina sy fiaraha-mizàka ireo Afgàna natsoaka avy any Kabul. Na izany aza, hatramin'ny nahatongavan'ny Taliban teo amin'ny fahefana, nanamafy ny fampielezan-kevitra mankahala vahiny amin'ny fanoherana ny fanampiana ireo mpitsoa-ponenana ny antoko politika mahery fihetsika elatra havanana sy ny haino aman-jery miaraka aminy.
Tamin'ny fahatongavan'ireo mpitsoa-ponenana amin'izao fotoana tany Skopje, nilaza ny minisitry ny raharaham-bahiny Bujar Osmani fa ahitana mpiara-miasa amin'ny Open Government Partnership (OGP), tambajotra iraisampirenena momba ny fahaiza-mitantana, sy mpiasan'ny fikambanana iraisam-pirenena na tsy miankina amin'ny fanjakana hafa, miaraka amin'ny vady aman-janany [ireo mpitsoa-ponenana ireo]. Hoy izy:
Mizara ny soatoavina iraisana momba ny fahalalahana, ny demaokrasia, ny fandriampahalemana ary ny fitoviana amin'ireo olona ireo izahay. Mampalahelo fa tsy noho ny fahadisoan'izy ireo, atahorana ny fiarovana azy ireo sy ny fiarovana ny fianakavian'izy ireo, ary tandindonin-doza ny ain'izy ireo. Noho izany dia nanapa-kevitra ny hanampy azy ireo izahay izao, ankehitriny, avy hatrany, rehefa tena mila fanampiana izy ireo.
Mpitsoa-ponenana araraotina anaovana propagandy politika
Lohahevitra niadian-kevitra nandritra ny herinandro maromaro ny fanekena ny fahatongavan'ireo mpitsoa-ponenana farany indrindra tao Makedonia Avaratra. Tafiditra ao anatin'izany ny lany amin'ny (fampiatranoana) azy ireo, izay nilamina (napetraka) rehefa avy nazava fa i Etazonia sy ireo mpamatsy vola tsy miankina no handoa ny lany amin'izany.
Fantatra ihany koa ny mombamomba ny olona tonga, izay nitenenan'ny praiminisitra Zoran Zaev, fa hisy “mpampandry tany, mpiaro zon'olombelona, ​​vehivavy, ankizy, olona miasa amin'ny resaka demaokrasia ary mpanampy ny tafitsika,” satria tao anatin'ny vondro-tafika OTAN tao Afghanistan nandritra ny roapolo taona ny tafiky ny Repoblikan'i Makedonia Avaratra.
Nanohitra ity hetsika fanampiana ity ry zareo antoko elatra ankavanana, indrindra ny mpanohitra ao amin'ny VMRO-DPMNE, mpikambana ao amin'ny Antokom-bahoaka Eoropeana, na dia nirehareha tamin'ny fandraisan'ny tafiky ny firenena anjara tamin'ny iraka tany Afghanistan (fony izy ireo teo amin'ny fitondrana) aza izy ireo taloha.
Tsikaritra teo amin'ireo faribolan'ny elatra havanana ao Serbia mpifanila vodirindrina aminy ihany koa ny fihetsika sahala amin'izany, izay manana fitaomana matanjaka manerana an'i Balkans Andrefana manontolo ny sangany politika sy mpampita vaovao avy aminy.
Tsy fantatro hoe hatraiza no tokony hankahalain'ny hafa an'i Amerika mba hanehoana ny fiaraha-mizàka amin'ny fahombiazan'ny Taliban, saingy miharihary fa maro no nahatratra izany haavo izany tany Serbia.
Taorian'ny nanambaran'i Makedonia Avaratra, niaraka tamin'i Albania sy Kosovo ny fahavononany hanaiky ireo mpitsoa-ponenana Afghana, tsikaritra ny fitomboana mazava amin'ny ezaka hanodikodina sain'ny vahoaka eo an-toerana sy hampisy lolom-po.
Nanomboka ny nasionalista Makedoniana tamin'ny fametrahana olana amin'ny isan'ny mpitsoa-ponenana ary nanely fandisoam-baovao momba ny fotoana sy ny endrika fijanonan'izy ireo. Anisan'izany ny famelomana indray ireo teorian'ny teti-dratsy taloha novolavolain'ny praiminisitra teo aloha Nikola Gruevski momba ny fanoloana ny vahoaka Makedoniana amin'ny “firohotan'ireo” Silamo mpifindramonina. Novelombelomin'ny propagandista indray ny fampitahorana taloha sady lainga hoe lehilahy anatin'ny fotoana iadiana ihany ireo mpitsoa-ponenana ho tonga hanangana vondrona mpampihorohoro miandry fotoana ihetsehana. Ny tena fahadisoan-kevitra fahita dia ny fanondroana ireo lasibatry ny Talibans ho toy ny tafika mpialoha ny lalan'ireo mpampahory azy ireo.
Raha nanamafy ny hafatra mankahala Silamo tamin'ny alàlan'ny media sosialy ny tafika mpandoto rindrina, nisy ihany koa ny olona marobe nanohitra ny tabataban'ny fankahalana sy ny fandisoam-baovao manararaotra ny fahorian'ny mpitsoa-ponenana.
Naneho hevitra ilay manam-pahaizana momba ny zon'olombelona, Mirjana Najchevska, PhD:
Tsy mpangalatra na mpandika lalàna na fanatika ara-pinoana ireo mandositra an'i Afghanistan amin'izao fotoana.
Olona avara-pianarana, olona malala-tsaina ary olona mahaleo-tena ireo mandositra ireo.
Toa mampatahotra ny olona sasany any Makedonia izany karazan'olona izany.
Fandisoam-baovao maro hafa, “vita Etazonia”
Nialohavana fandisoam-baovao avy any Etazonia ihany koa ny fahatongavan'ireo mpitsoa-ponenana Afghana tao Makedonia Avaratra, namboarina hanimbàna ny fitantanan-draharaha ankehitriny manoloana ny Amerikana mpihaino.
Nalaza haingana ny iray tamin'ireny fampahalalana diso ireny: Amerikana mpaneho hevitra politika mpandala ny mahazatra, mpanamarina ny fisian'ny petra-kevitra firaisana tsikombakomba, mpandray vahiny amin'ny fampielezam-peo, sady mpanatontosa fandaharana fahitalavitra Glenn Beck no namoaka sioka iray izay misy sombin-dresaka nifanaovana tamina loholon'i Arkansas, Tom Cotton, izay nilaza lainga fa nangatahan'ny governemantan'i Etazonia ny makedoniana mpiara-dia amin-dry zareo tsy hanaiky [handray] mpitsoa-ponenana.
Naheno tatitra aho fa nilaza tamin'i Makedonia ny Departemantam-Panjakantsika mba hitsahatra amin'ny fandraisana mpitsoa-ponenana Afghana. Nilaza tamiko i @SenTomCotton fa nahare tatitra mitovy amin'izany. Raha tsy hanavotra ireo olona ireo ny governemanta, dia izahay no hanao izany. Saingy tsy tokony hijanona eo amin'ny lalana ny Departemantam-panjakana. pic.twitter.com/gYzYBzR8N4
Ao amin'ny horonan-tsary i Beck milaza fa “[tsy fantatra mazava hoe iza] ” izy ireo” nitady toerana hisidinan'ny olona mba hihazonana azy ireo ary iiray amin'izany i Makedonia sady ambasadaorintsika… na nantsoin'ny Departemantam-panjakana ny ambasadaoron'i Makedonia ka nilazana tsy handray na iza na iza amin'ireny olona ireny. ”
Napongatry ny Ny serivisy fanamarinana zava-misy Truthmeter ny fahadisoan'ireo fanambarana ireo. Nifandray tamin'ny governemantan'i Makedonia Avaratra sy ny minisiteran'ny raharaham-bahiny ireo mpanao gazety ao aminy, nanontany raha marina fa nahazo izany karazana fangatahana izany avy amin'ny manampahefana amerikana izy ireo. Mazava ny valiny fa tsy marina ireo fanambarana ao amin'ny sioka sy sombin-dahatsary ireo:
Tsy marina izany. Nanaiky ny handray ireo olom-pirenena Afgàna 780 ny governemanta mba hanavotana ny ain'izy ireo. Tanterahina amin'ny fiaraha-miasa feno amin'i Etazonia ny iraka feno fanasoavana olona ataon'ny governemanta .
Mifanohitra amin'ny fanambaran'i Beck, nanamafy ny politikany amin'ny fanekena ireo mpitsoa-ponenana Afghàna ny praiminisitra Zoran Zaev, tamin'io andro io ihany (26 aogositra 2021), ora vitsivitsy monja talohan'ny namoahana ny sioka:
Raha olona iray monja no vonjentsika, heveriko fa mamonjy an'izao tontolo izao isika. Manome firaisankina isika, niantso sy nanolotra miaraka amin'ireo mpiara-miombon'antoka stratejika amin'ny maha-firenena antsika, mifanaraka amin'ny fahaizantsika sy ny fahafahantsika manao, hizara izany andraikitra izany, hampiroborobo ny fitsipika sy ny soatoavina amin'ny tontolo demaokratika, raha tonga ny fanekena ireo olona avy any Afghanistan iharan'ny fandrahonana mety ho very ny ainy.
Nampiroborobo ny teoria fikomiana isan-karazany momba ireo Amerikana liberaly manomboka amin'ny filoham-pirenena Barack Obama ka hatramin'ilay mpanankarena mpanao asa soa George Soros i Glen Beck, nandritra ny asany tamin'ny naha mpaneho hevitra sy olo-malazan'ny media azy, ary nilaza lainga mihitsy aza fa tamin'ny naha-zazalahy an'i Soros, niangana tamin'ny fisoronana [Holocaust], dia nanampy “amin'ny fandefasana ny Jiosy ho any amin'ny toby famonoana.” Raha niala tsiny i Beck taty aoriana noho ireo fanambarana ireo, ny sasany kosa nihevitra fa kely loatra, tara loatra izany.
“Rehefa dinihina ireo fandresen-dahatra rehetra ireo, dia manome naoty ity filazan'i Glenn Beck, mpaneho hevitra mpandala ny nentin-drazana, voalaza tao amin'ny tambajotran-tseraserany The Blaze ity ho tsy marina,” hoy ny nosoratan'i Truthmeter.mk.
15 Septambra 2021Azia Atsinanana